တကိုယ်ရည် အာသာဖြေခြင်းက ပုံမှန်ကိစ္စတစ်ခုလား | သိလိုရာမေး
ထွေလာဆန်းပြား လိင်ဆောင်းပါး တကိုယ်ရည် အာသာဖြေခြင်းက ပုံမှန်ကိစ္စတစ်ခုလား
တကိုယ်ရည် အာသာဖြေတဲ့အကြောင်းနဲ့ ပတ်သက်လို့ ပြောကြဆိုကြဖို့ လူအများစုက ရှက်နေတတ်ကြပါတယ်။ တကယ်တမ်းကျတော့ တကိုယ်ရည်အာသာဖြေတယ်ဆိုတာ ပုံမှန်ကိစ္စတစ်ခုသာဖြစ်ပါတယ်။
တကိုယ်ရည် အာသာဖြေတဲ့အကြောင်းနဲ့ ပတ်သက်လို့ ပြောကြဆိုကြဖို့ လူအများစုက ရှက်နေတတ်ကြပါတယ်။ တကယ်တမ်းကျတော့ တကိုယ်ရည်အာသာဖြေတယ်ဆိုတာ ပုံမှန်ကိစ္စတစ်ခုသာဖြစ်ပါတယ်။ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး ၉၀ ရာခိုင်နှုန်းအထက်က တခါတလေ တကိုယ်ရည်အာသာဖြေခြင်းကို ပြုလုပ်ကြပြီး လူအများစုကတော့ ပုံမှန်လုပ်လေ့လုပ်ထရှိတတ်ကြပါတယ်။ ဒါက တခြားလူတွေနဲ့ သွေဖီဆန့်ကျင်နေတဲ့ ကိစ္စမဟုတ်ဘဲ လူသားတွေ ပြုမူတတ်ကြတဲ့ အလေ့အထပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
တကိုယ်ရည်အာသာဖြေတာက မကောင်းတဲ့လုပ်ရပ်မဟုတ်ဘူးဆိုတာ သင်အနေနဲ့ သိထားရင်တောင်မှ ဒီကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်လို့ ယုံတမ်းတွေ စိုးရွံ့မှုတွေ အများကြီးရှိနေနိုင်ပြီး ဒါကို မလုပ်သင့်တဲ့အရာတစ်ခုအဖြစ် ထင်ကောင်းထင်နေနိုင်ပါတယ်။ မည်သိ့ုပင်ဖြစ်စေ လူအများစုကတော့ သူတို့ရဲ့ ပထမဆုံးကာမသုခကို တကိုယ်ရည်အာသာဖြေခြင်းဖြင့် တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
တကိုယ်ရည်အာသာဖြေခြင်းက ပုံမှန်ဟုတ်သလား ?
အရွယ်ရောက်ပြီးသည့် မည်သည့်အသက်အရွယ်နှင့် လိင်ကွဲပြားမှု မရွေး တကိုယ်ရည်အာသာဖြေခြင်းအမှုကို ပြုလုပ်ကြပင်မယ့် ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်းတော့ မရှိကြပါဘူး။ အရွယ်ရောက်တော့မယ့် ကလေးအများစုက သူတို့ရဲ့ မျိုးပွားအင်္ဂါကို ထိတွေ့မိတဲ့အခါ ကောင်းမွန်တဲ့ ခံစားချက်ကို ခံစားမိနိုင်ပါတယ်။ ဒါကလဲ ပုံမှန်ဖြစ်လေ့ရှိတဲ့အရာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အရေးကြီးတဲ့အချက်ကတော့ ကိုယ်တစ်ယောက်တည်း သီးသန့်ဖြစ်တဲ့အချိန်မျိုး ဖြစ်သင့်ပါတယ်။
လူတွေက တကိုယ်ရည်အာသာဖြေခြင်းအမှုကို မိမိတို့ရဲ့ စိတ်အပန်းဖြေဖို့အတွက်၊ စိတ်ပင်ပန်းမှုတွေကို ဖြေလျှော့ဖို့အတွက် ဒါမှမဟုတ် လိင်စိတ်တက်ကြွတာကို ဖြေဖျောက်ဖို့နဲ့ ကိုယ့်ရဲ့အဖော် အဝေးကို ရောက်နေတဲ့အခါ စသည့် အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ပြုလုပ်တတ်ကြပါတယ်။ လူအများစုကတော့ တကိုယ်ရည်အာသာဖြေခြင်းကတဆင့် ကာမသုခကို ပထမဆုံးခံစားဖူးတဲ့အတွက် ဒီကောင်းမွန်တဲ့ခံစားချက်ကို ထက်ပြီးလိုချင်လို့ လုပ်ကြတာများပါတယ်။ အမျိုးသမီးအများစုက မိမိရဲ့ ကာမသုခအထွတ်အထိပ်ရောက်တဲ့ ခံစားမှုကို တကိုယ်ရည်အာသာဖြေခြင်းကနေတဆင့် ရရှိတတ်ကြပါတယ်။
တကိုယ်ရည်အာသာဖြေတဲ့ကိစ္စက ငယ်ရွယ်သူအများစုနဲ့ တယောက်တည်းနေတဲ့သူတွေမှာ နားလည်မှု ပိုလွဲတတ်ပါတယ်။ တကယ်တော့ ဒီကိစ္စက စုံတွဲတွေမှာရော တစ်ယောက်တည်းသမားတွေမှာပါ လုပ်ဆောင်တတ်ကြတဲ့ ကိစ္စတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ တချို့လူတွေက အကြိမ်ရေများများ လုပ်ဆောင်တတ်ပြီး လုံးဝမလုပ်တဲ့သူတွေလဲ ရှိပါတယ်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ တကိုယ်ရည်အာသာဖြေခြင်းဆိုတာက ကိုယ့်ရဲ့ ရွေးချယ်မှု တစ်ခုသာဖြစ်ပါတယ်။
စစ်တမ်းတွေက ဘာပြောလဲ ?
မြန်မာနိုင်ငံမှာ DKT International ကနေ လတ်တလောလေ့လာထားတဲ့ စစ်တမ်းအရ အမျိုးသား ၈၃ ရာခိုင်နှုန်း နှင့် အမျိုးသမီး ၃ ရာခိုင်နှုန်းတို့က တကိုယ်ရည်အာသာဖြေလေ့ရှိတယ်လို့ ဆိုထားပါတယ်။ မည်သို့ဆိုစေကာမူ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ လေ့လာချက်များအရ အမျိုးသား ၉၅ ရာခိုင်နှုန်းနှင့် အမျိုးသမီး ၈၁ ရာခိုင်နှုန်းက သူတို့ရဲ့ ဘဝတစ်လျှောက် တကိုယ်ရည်အာသာဖြေခြင်းအမှုကို ပြုကြတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ အမျိုးသမီးတွေအတွက် တကိုယ်ရည်အာသာဖြေခြင်းက ရှက်စရာကောင်းတဲ့ကိစ္စတစ်ခု၊ မလုပ်သင့်တဲ့အရာတစ်ခုလို့ ထင်မြင်နေကြပါတယ်။ အမျိုးသားအများစုကတော့ တကိုယ်ရည်အာသာဖြေခြင်းက လူသားတွေပုံမှန်လုပ်နေကြဖြစ်တဲ့ ကိစ္စတစ်ခုလို့ ရှုမြင်ကြပြီး ဒါကို ပြုလုပ်ကြတယ်လို့လည်း ဝန်ခံထားကြပါတယ်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ အမျိုးသမီးတွေ တကိုယ်ရည်အာသာဖြေတာကိုတော့ သိပ်ပြီးလက်မခံကြသေးပါဘူး။ အမျိုးသမီးအများအစုက သူတို့ရဲ့ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသာယာပျော်ရွှင်မှုနဲ့ ပတ်သက်လို့ ဝေဖန်ဆုံးဖြတ်ချက်တွေနဲ့ ရင်ဆိုင်နေရစဲပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
သိထားဖို့ လိုတာကတော့ တကိုယ်ရည်အာသာဖြေခြင်းကနေ ရရှိနိုင်တယ် ကောင်းကျိုးတွေ အများကြီး ရှိတဲ့အတွက် ယုံတမ်းတွေ နားလည်မှုအလွဲတွေကနေ ဖောက်ထွက်လိုက်ပါ။ တကိုယ်ရည်အာသာဖြေတာက သားမြုံခြင်း ဒါမှမဟုတ် သုတ်ပိုးအားနည်းခြင်းကို မဖြစ်စေပါဘူး။ အမျိုးသားများ တကိုယ်ရည်အာသာဖြေလို့ လိင်တံအရွယ်အစားအပေါ် ပြောင်းလဲမှု မရှိနိုင်ပါဘူး။ တကိုယ်ရည်အာသာဖြေခြင်းက မလိုချင်သေးတဲ့ကိုယ်ဝန်နဲ့ လိင်ကတဆင့်ကူးစက်တတ်တဲ့ရောဂါတွေ ရနိုင်တဲ့ အခွင့်အလမ်းတွေကို လျှော့ချပေးနိုင်ပါတယ်။ သုတေသနလေ့လာချက်များအရ တကိုယ်ရည်အာသာဖြေခြင်းက စိတ်ဖိစီးမှုနဲ့ ဖိအားတွေကို လျှော့ကျစေနိုင်ပြီး ကောင်းမွန်စွာ အိပ်ပျော်စေဖို့ အထောက်အကူဖြစ်တယ်လို့ ဆိုထားပါတယ်။ ထို့အပြင် အမျိုးသမီးတွေ ဓမ္မတာလာစဉ်နာကျင်ကိုက်ခဲခြင်းကို လျှော့နည်းစေပြီး မွေးလမ်းကြောင်းကြွက်သားတွေကို ပိုမိုသန်မာစေတယ်လို့ ဖော်ပြထားပါတယ်။
တကိုယ်ရည်အာသာဖြေခြင်းကနေတဆင့် ကာမဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်တွေကို ပိုမိုနားလည်လာစေနိုင်ပါတယ်။ ကာမအထွတ်အထိပ်ရောက်တဲ့ ခံစားချက်ကို နားလည်ထားတဲ့အတွက် ကိုယ့်အဖော်နဲ့ ဆက်ဆံတဲ့အခါမှာ ကိုယ့်ရဲ့ ခံစားချက်အမှန်ကို ပြောပြလို့ရပါတယ်။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကတော့ သင့်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ လိုလားချက်ကို သင်ကိုယ်တိုင် ဆုံးဖြတ်ပါ။ လိင်အကြောင်းနဲ့ တကိုယ်ရည်အာသာဖြေတဲ့ ကိစ္စကို ဆွေးနွေးဖို့ ဒါမှမဟုတ် တွေးတောဖို့က ရှက်ဖို့ကောင်းတယ်လို့ သင်တွေးကောင်းတွေးနေပါလိမ့်မယ်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ တကိုယ်ရည်အာသာဖြေတာက သင့်အတွက် မကောင်းဘူး ဒါမှမဟုတ် မလိုအပ်ဘူးလို့ ထင်နေပါသလား။ တကိုယ်ရည်အာသာဖြေတာကို မလုပ်လိုဘူး ဒါမှမဟုတ် နောက်ဘယ်တော့မှာ မလုပ်တော့ဘူးလို့ ဆုံးဖြတ်ထားပါသလား။ ဒီဆုံးဖြတ်ချက်တွေ အားလုံးက ပုံမှန်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ လုပ်ခြင်း မလုပ်ခြင်းက သင့်ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ်သာ မူတည်ပါတယ်။